War Deg Deg Ah Al-Shabaab oo Sheegtay in ay weerareen gudahana u galeen Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho - iftineducation.com
iftineducation.com – Xarakada Al-Shabaab ayaa goorhaw sheegtay masuuliyada qaraxyo xoogan oo caawa gil gilay magaalada Muqdisho gaar ahaan goobo ku dhaw Beernta Nabad iyo Hotelka SYL oo ah labo goob oo isku dhagan kuna dhaw xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.
Afhayeenka Howlagalada Al-Shabaab ayaa goordhaw Warbaahinta afkooda ku hadasha iyo qaar kamid ah kuwa caalamiga u xaqiijiyeen in ay weerareen Hotelka SYL oo ku dhagan beerta Nabad ayna gudaha Hotelka u galeen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay Afhayeenka in rag hubeesan oo katirsan Al-Shabaab in ay gudaha u galeen dhismaha Hotelka SYL ayna halkaasi ka wadaan howlgal, waxa uuna tilmaamay in hoteelkaasi ay dagan yihiin masuuliyiin katirsan Dowlada.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Qaraxa hore ee ismiidamainta uu ka dhacay meel u dhaxeysa Hotelka SYL iyo Beerta Nabada, waxaana rag hubeesan oo qorsheenayay in gudaha u galaan hotelka la sheegay in qaarkood la toogtay kahor inta aysan hotelka galin.
Qasaaraha xoogiisa ee labada qarax ayaa lagu soo waramayaa in uu gaaray dadkii kusugnaa gudaha Beerta Nabad oo ah goob loo dalxiis tago, walina ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Doowlada Soomaaliya oo ku aadan Weeraradan.
Wararkii Ugu Dambeeyay Qaraxyadii iyo Weerarkii Caawa lagu qaaday Hotelka SYL iyo Ciidanka Nabad Sugida oo …